‘समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउन नसक्ने, अनि काम चलाउन भो रे !’ | दर्पण दैनिक
‘समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउन नसक्ने, अनि काम चलाउन भो रे !’
प्रकाशित मिति: २०७७ चैत्र २३ गते ०२:३४
काठमाडौं । पूर्व सञ्चारमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गोकुल बास्कोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिए नयाँ ढंगबाट अघि बढ्ने बताएका छन । सोमबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बास्कोटाले माओवादीलाई सर्मथन फिर्ता लिन चुनौति दिएका हुन ।
उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउन नसक्ने, अनि काम चलाउन भो रे। समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, नयाँ ढंगले अघि बढ्छ। आफैँ अड्काउने आफैँ पड्काउने ? विचार लिएर जान सबै स्वतन्त्र हुन्छ। चुनावमा जानु प्रतिगमन हुन्छ भने शाही जनवाद ल्याउन गरिएको प्रयास चाहिँ अग्रगमन हुने हो र ?’
चुनावदेखि डराउनेहरुले संसद विघटनलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘ताजा जनादेशको विकल्प छैन। संसद विघटन बेठिक थिएन। बेलायत, भारतमा पनि चुनावमा हुने गरेको छ। त्यो प्रतिगमन हुन्छ ? चुनाव सुन्दै डराउने ?’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको पक्षमा काम गरेको देखेर केही व्यक्तिहरुको प्रेसर बढेको उनले बताए।
उनले भने , ‘१६५ वटा सडक बनाउने कुरामा पनि नकारात्मकता देख्ने ? प्रधानमन्त्रीले जनताको पक्षमा काम गरेको देखेर कसैको ब्लड प्रेसर बढेको छ। जनता दंग, नेताहरु भरङ्ग किन भएको होरु यो विचित्रको अवस्थामा किन देखियो ? भोलि तथ्यांक लिएर चुनावमा जाउँला।’ ओली नेतृत्वको सरकार देशलाई समृद्ध बनाउन लागेको उनको दावी थियो।